घरहरू | अक्टोबर 2021
जब बृहस्पति आफ्नै घर मा हुन्छ के हुन्छ?
जब बृहस्पति आफ्नै घर मा हुन्छ के हुन्छ? बृहस्पति आफ्नै घरमा राखियो उसले बृहस्पति को सबै राम्रो गुण प्राप्त गर्दछ। यस्तो व्यक्ति धैर्य, उदार र नैतिक छ। उसले राम्रो चीजको आनन्द प्राप्त गर्दछ र यसैले केही गर्व महसुस गर्न सक्छ। ऊ सहयोगी परिवारको साथ आशिष पाएको छ र बच्चाहरूको आनन्द प्राप्त गर्दछ।
जुपिटर ट्रान्जिट कुन घरमा छ?
जुपिटर ट्रान्जिट कुन घरमा छ? जब ट्रान्जिट बृहस्पति तपाईंको 9th औं घरमा छ, ऊ घरमा छ कि उसले स्वाभाविक रूपमा नियम बनाउँछ, त्यसैले ऊ यहाँ घरमा छ, र यो तपाईंको लागि राम्रो छ। यो त्यस्तो समय हो जहाँ तपाईं आफ्नो जीवनलाई कुनै तरिकाले विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, र यसो गर्न तपाईंलाई धेरै अवसरहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
तपाईको पहिलो घरमा मंगल हुनु भनेको के हो?
तपाईको पहिलो घरमा मंगल हुनु भनेको के हो? पहिलो घरको अर्थको म Mars्गलले देखाउँदछ कि तपाईं सबै कुरा बोल्ड मनसाय र उत्साहका साथ शुरू गर्नुहुन्छ। भविष्यको लागि ठोस योजनाको सट्टा तपाई प्राय: तपाईका कार्यहरू लाई हुकूम दिनुहोस्।
१२ औं घरमा मंगल भनेको के हो?
१२ औं घरमा मंगल भनेको के हो? १२ औं घरमा मंगल ग्रहका मानिसहरु आफ्ना भावनाहरु लाई दबाउन को लागी प्रवृत्ति राख्छन् यद्यपि सामाजिक रुपमा उनीहरु धेरै खुल्ला र मैत्री जस्तो देखिन्छन्। ०. १२ औं घरका मूलका मंगलहरू सबै प्रकारका चीजहरूमा भावनात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्छन् र उनीहरूको सहज ज्ञानलाई दबाउन सक्छन्। २०१।
मंगल ग्रह कुन घर हुँदैछ?
मंगल ग्रह कुन घर हुँदैछ? तपाईंको चौथो घरको मार्सट ट्रान्जिट घरमा शारीरिक गतिविधि द्वारा प्रभुत्व राखिन्छ। भावनात्मक समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्दछन्, विगतका दर्दनाक अनुभवहरूको अवचेतन सम्झनाहरू द्वारा ट्रिगर गरिएको। परिवार समस्या र विवाद पनि उठ्न सक्छ, र यो कम पाचन गर्न सक्छ।
बुध कति लामो घर पार गर्दछ?
बुध कति लामो घर पार गर्दछ? ट्रान्जिट (चल्दै) बुध एकदम चाँडो यात्रा गर्दछ, प्रत्येक चिन्हमा लगभग एक महिना खर्च गर्दछ, यद्यपि यसले लामो समय लिन सक्दछ यदि एक चिन्हमा retrogrades (पछाडि सर्छ)। पक्षहरू यसले लगभग दुई दिनको लागि बनाउँदछ, दिन अघि र अघिल्लो दिन।
नेप्च्यूनको लागि कुन घर राम्रो छ?
नेप्च्यूनको लागि कुन घर राम्रो छ? उत्तम परिदृश्यमा तिनीहरूको दोस्रो घरमा नेपच्यूनको साथ चार्ट होल्डरले केही गरेर कलात्मक, आध्यात्मिक, वा कम्तिमा व्यक्ति बनाउँछ र सम्बन्धित महसुस गरिरहेको छ। यदि चार्ट होल्डरले रोजगार कमाउनको सट्टा जिम्मेवारीको आनन्दमा ध्यान दिन सक्दछ भने नेप्च्यून बढी खुसी हुन्छ।
यो नयाँ चन्द्रमा कुन घर हो?
यो नयाँ चन्द्रमा कुन घर हो? पाँचौं घर
तुलामा दक्षिण नोड हुनुको अर्थ के हो?
तुलामा दक्षिण नोड हुनुको अर्थ के हो? दक्षिण नोड तुलाहरू स्वतन्त्र महसुस गरिरहेछन् जब सही चीजहरू गर्दा र राम्रो व्यवहार गरिरहेछन् किनकि उनीहरू केवल धेरै दयालु छन्। तिनीहरू आफूलाई अस्वीकार भन्दा अरूलाई अस्वीकार बढी डर। तुला राशिको यस चन्द्र नोडको सबैभन्दा गाह्रो चुनौती भनेको एक्लो हुने डरको साथ व्यवहार गर्दैछ।
क्यान्सरमा उत्तर नोड र मकरमा दक्षिण नोडको अर्थ के हो?
क्यान्सरमा उत्तर नोड र मकरमा दक्षिण नोडको अर्थ के हो? परम्परागत रूपमा, क्यान्सरमा नर्थ नोडलाई भाग्यशाली स्थानको रूपमा लिइन्छ। यसले राम्रो निर्णय र अन्तरदृष्टि दिन्छ। यद्यपि मकरमा सम्बन्धित दक्षिण नोडले एक उच्च कडा प्रकृति र प्रेम सम्बन्धको साथ समस्या दर्शाउँछ। २०१।
मिथुनमा उत्तरी नोड हुनु भनेको के हो?
मिथुनमा उत्तरी नोड हुनु भनेको के हो? मिथुनमा नर्थ नोड भएका व्यक्तिहरूले जीवनको सौन्दर्यको आनन्द लिनुपर्दछ, साथै यसको अराजकता पनि, यसको मतलब उनीहरूले आफ्नो जिज्ञासालाई पूरा गर्नुपर्दछ र राम्रो संचारकर्मी बन्नु पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरू साहसिक र सुरक्षा जोखिममा छन् साहसिक बन्नका लागि साथै 2019।
कुम्भमा दक्षिणी नोड हुनु भनेको के हो?
कुम्भमा दक्षिणी नोड हुनु भनेको के हो? कुम्भमा उनीहरूको दक्षिण नोडको साथ व्यक्तिहरू छुट्टिन्छन् र व्यक्तिगत रूपमा समावेश हुँदैन, त्यसैले जब यो आत्मको महिमाको कुरा आउँछ, तिनीहरू पूर्ण रूपमा यसको पछाडि हुन्छन्। यी मूल निवासीहरू फरक हुन आग्रह गर्दै छन् र केको लागि तिनीहरू अरूले पनि अँगाल्न चाहन्छन् ।२ 2019२।।
मेषमा दक्षिण नोडको अर्थ के हो?
मेषमा दक्षिण नोडको अर्थ के हो? मेषमा दक्षिण नोडको साथ जन्मेका व्यक्तिहरू स्वतन्त्र र दबदबाको हुन्छन्, यसको मतलब तिनीहरू एक्लोपनमा अन्त हुन सक्दछन्, चाहे तिनीहरूले जतिसुकै सम्बन्धहरू राख्दछन्। यसको कारण यो छ कि उनीहरू कमजोर देखिन चाहँदैनन् र आफ्ना प्रियजनहरूलाई टाढा राखेका छन्, जुन पछि उनीहरूलाई फिर्ता चाहान्छन्।
यसको अर्थ के हो यदि मेरो एन नोड मीनमा छ?
यसको अर्थ के हो यदि मेरो एन नोड मीनमा छ? नियमहरू द्वारा खेल्दै। कसैको जन्म चार्टमा मीनसको उत्तर नोडले उनीहरू अनुकम्पापूर्ण र दृष्टिवान रहेको सुझाव दिन्छ, र त्यो पनि नेतृत्व गर्न सक्षम छ। उनीहरूले क्यारियरको रूपमा के रोजिरहेका छन् भन्ने कुराले फरक पार्दैन, यो उनीहरूको अनुकम्पा र सहज ज्ञान युक्तिहरू हुन् जसले तिनीहरूलाई सफल बनाउन सक्दछ।
यसको मतलब के हो यदि तपाईंको दक्षिण नोड मिथुनमा छ?
यसको मतलब के हो यदि तपाईंको दक्षिण नोड मिथुनमा छ? मिथुनमा दक्षिण चार्टको प्लेसमेन्ट जन्म चार्टमा एक व्यक्तिलाई संकेत गर्दैछ जसले केवल एउटा मुद्दामा प्रतिबद्ध गर्न सक्दैन। मिथुनमा दक्षिण नोडको साथ मूल निवासीहरूले आफूलाई त्यस्तो चीजहरूमा विश्वास गर्न अनुमति दिनुपर्दछ जसले सुरुमा कुनै अर्थ राख्दैन किनभने यस तरिकाले, तिनीहरू अब जोड्न सक्दैनन् ।२ 2019२ 2019 २०१।।
वृषमा उत्तरी नोड र वृश्चिकमा दक्षिण नोडको अर्थ के हो?
वृषमा उत्तरी नोड र वृश्चिकमा दक्षिण नोडको अर्थ के हो? उत्तर नोड जीवनकालमा आत्माको दिशा हो, र यसले मध्य-जीवन पछाडि किक गर्‍यो। दक्षिण नोड तपाईको उत्तराधिकार मानिन्छ। वृषभ-वृश्चिक ध्रुवता स्थिरता सिर्जना गर्ने मध्ये एक हो, या त भावनात्मक वा भौतिक रूपमा १55 2018।
यसको मतलब के हो जब तपाईंको उत्तर नोड कन्यामा छ?
यसको मतलब के हो जब तपाईंको उत्तर नोड कन्यामा छ? कन्याको उत्तरी नोडले तपाईंलाई कडा भित्री निर्देशन दिन्छ जसमा एक विश्लेषणात्मक दिमाग, जीवन स्थितिको लागि व्यावहारिक दृष्टिकोण, सिद्धताको लागि चाहना, र भावनाहरूबाट छुट्टिनु समावेश छ।
यसको मतलब के हो जब तपाईंको घरमा ग्रहहरू छन्?
यसको मतलब के हो जब तपाईंको घरमा ग्रहहरू छन्? यदि तपाईंसँग घरमा एउटा ग्रह छ भने, यसको मतलब यो हो कि ग्रहको स्वभाव र विषयवस्तुहरू त्यस घरको जीवन क्षेत्रमा मिसिएका छन्। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, यसको सीधा मतलब यो छ कि तपाईसँग कुनै खास ग्रहको उर्जा छैन जुन जीवनको क्षेत्र into.२०२० मा निहित हुन्छ।
घरमा प्लूटो भनेको के हो?
घरमा प्लूटो भनेको के हो? जीवन क्षेत्र
प्लुटु अहिले कुन घर हुँदैछ?
प्लुटु अहिले कुन घर हुँदैछ? प्लूटो दोस्रो घर ट्रान्जिट गर्दछ जब प्लूटोले यस घरलाई स्थानान्तरण गर्दछ तपाईले आफ्नो घर, पैसा वा भौतिक स्रोतहरू गुमाउन सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई पछि पूर्ण प्रकारले पुन: प्राप्त गर्न। यो वास्तवमै सम्पत्तीमा नजोडी हुन सिक्नु र सुरक्षाको भावना विकास गर्नु हो जुन बाह्य भन्दा बाह्य हो।